Maninona izahay no tsy mamporisika ny fanafanana herinaratra ao amin'ny Brewhouse-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Maninona izahay no tsy mamporisika ny fanafanana herinaratra ao amin'ny trano fisotroan-toaka
Ny tena antony mahatonga ny bara elektrika dia afaka mamokatra fanafanana eo an-toerana mihoatra ny 200 ℃ amin'ny fotoana iasana. Ny mari-pana ambony toy izany dia mety hitarika amin'ny fanaovana gazy karbonika eny ambonin'ny bar. Rehefa ao anaty wort matevina izy io, ny wort dia miraikitra amin'ny tampon'ny herinaratra izay miteraka fofona manitra izay misy fiantraikany amin'ny tsiro labiera.
Tsy mora ny manadio ny karbaonaina, manome sosokevitra soda 5% hanasana azy izahay. Amin'izany dia ho vonona kokoa ny hanome torolàlana momba ny rafitra fanafanana etona na solika mafana isika. Mahatratra 143 ℃ ny etona raha 3bar ihany ny tsindry, fomba famafana hevitra be mihitsy.
Ho fanampin'izany dia tsy mamporisika ny fanamafisana herinaratra fanitrihana amin'ny ankapobeny izahay tsy midika hoe tsy mamokatra fitaovana fanaovana labiera amin'ny fanamainana elektrika isika. Raha ny marina dia safidy mety amin'ny faritra sasany izany.
Previous: Tetikasa 500L Brewhosue Torkia eo an-dàlam-pamokarana
Next: Mandray anjara amin'ny fampirantiana an-tserasera i Coff